प्रश्न: टेस्टोस्टेरोनको एउटा चक्रले तपाईंलाई चोट पुर्याउनेछ - BikeHike
टेस्टोस्टेरोन चक्रबाट निको हुन कति समय लाग्छ?
टेस्टोस्टेरोन स्टेरोइडहरू किक गर्न कति समय लाग्छ?
मैले चक्रहरू बीचमा कति लामो पर्खनुपर्छ?
के हस्तमैथुनले टेस्टोस्टेरोन कम गर्छ?
मैले टेस्टोस्टेरोन लिन छोड्दा के हुन्छ?
TRT तपाइँको जीवन छोटो छ?
टेस्टोस्टेरोन सुई दिनको सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो?
बडीबिल्डरहरूले कुन स्टेरोइडहरू लिन्छन्?
टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरोइड हो?
के स्खलनले तपाईलाई कमजोर बनाउँछ?
हस्तमैथुन नगर्दा के फाइदा हुन्छ ?
धेरै टेस्टोस्टेरोन को साइड इफेक्ट के हो?
के टेस्टोस्टेरोन चक्कीहरू खराब छन्?
के उच्च टेस्टोस्टेरोन भएका मानिसहरू लामो समयसम्म बाँच्छन्?
के टेस्टोस्टेरोन लिनु राम्रो हो?
तपाईं कति वर्ष TRT मा रहन सक्नुहुन्छ?
के 1 मिलीलीटर टेस्टोस्टेरोन धेरै हो?
टेस्टोस्टेरोन शटहरू काम गर्न सुरु गर्न कति समय लाग्छ?
के तपाइँ टेस्टोस्टेरोन शटहरूमा ओभरडोज गर्न सक्नुहुन्छ?
मांसपेशी निर्माणको लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्टेरोइड के हो?
सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉयड के हो?
मासको लागि उत्तम स्टेरोइड के हो?
के तपाइँ तपाइँको बलहरूमा टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ?
के टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरू सुरक्षित छन्?
लगभग सबै पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोन सांद्रता चक्र समाप्त भएको तीन महिना पछि सामान्यमा फर्किएको थियो, र 100 महिनामा 12%, अध्ययनको सुरुमा उनीहरूमा सामान्य गोनाडल प्रकार्य थियो।
परिणामहरू। यौन चासोमा प्रभावहरू3हप्ता पछि6हप्तामा देखा पर्दछ, त्यसपछि कुनै थप वृद्धि अपेक्षित छैन। इरेक्शन/स्खलनमा परिवर्तन हुन ६ महिनासम्म लाग्न सक्छ। जीवनको गुणस्तरमा प्रभाव 6-3 हप्ता भित्र प्रकट हुन्छ, तर अधिकतम लाभहरू धेरै समय लाग्छ।
साइकलहरू बीचको दूरी भनेको भ्रूण स्थानान्तरण र नकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण पछि लगभग4देखि6हप्ता पर्खनु भनेको धेरैजसो महिलाहरूको लागि अर्को पूर्ण चक्र सुरु गर्न। लगातार धेरै पटक यसो गर्नुलाई ब्याक टु ब्याक IVF चक्र भनिन्छ। जब चक्रहरू थप अलग हुन्छन्, तिनीहरूलाई ढिलाइ भनिन्छ।
धेरै मानिसहरू हस्तमैथुनले पुरुषको टेस्टोस्टेरोन स्तरलाई असर गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, तर यो आवश्यक रूपमा सत्य होइन। हस्तमैथुनले टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने देखिँदैन।
यदि तपाईंले धेरै टेस्टोस्टेरोन प्रयोग गर्नुभएको छ भने, औषधि बन्द गर्नाले डिप्रेसन, थकान, चिडचिडापन, भोक नलाग्ने, निद्राको समस्या, वा कामवासना कम हुने जस्ता अप्रिय लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ।
TRT सँग सम्बन्धित कार्डियोभास्कुलर समस्याहरू हालैका अध्ययनहरूद्वारा स्पष्ट गरिएको छ कि सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तरमा सामान्य दायरामा स्पष्ट वृद्धिसँग सम्बन्धित थेरापी सबै-कारण मृत्युदरमा कमीसँग सम्बन्धित छ।
परम्परागत रूपमा, यो बिहान हो। बिहान टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्सन गर्न वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक छैन, यद्यपि हाम्रो टेस्टोस्टेरोन बिहान उच्चतम स्तरमा हुन्छ।
यहाँ आज लिइएका केही सामान्य एनाबोलिक स्टेरोइडहरूको सूची छ: anadrol, oxandrin, dianabol, winstrol, deca-durabolin, र equipoise।
एनाबोलिक स्टेरोइडहरू तपाईंको शरीरद्वारा उत्पादित मुख्य एनाबोलिक स्टेरोइड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो। टेस्टोस्टेरोनले तपाईंको शरीरमा दुई मुख्य प्रभावहरू छन्: एनाबोलिक प्रभावहरूले मांसपेशी निर्माणलाई बढावा दिन्छ। एन्ड्रोजेनिक प्रभावहरू पुरुष लक्षणहरूको लागि जिम्मेवार छन्, जस्तै अनुहारको कपाल र गहिरो आवाज।
हस्तमैथुनले कमजोरी निम्त्याउँछ ? होइन, हस्तमैथुनले कमजोरी उत्पन्न गर्दैन। प्रोल्याक्टिन हर्मोन हस्तमैथुनको समयमा निस्कन्छ र अध्ययनका अनुसार प्रोल्याक्टिनले निद्रामा प्रभाव पार्न सक्छ, जसले गर्दा तपाईलाई थकान र निद्रा लाग्न सक्छ। रमाइलो तथ्य के हो भने, धेरै व्यक्तिहरू निदाउन र तनाव कम गर्न मद्दत गर्न हस्तमैथुन पनि गर्छन्।
केही दिन स्खलनबाट टाढा रहँदा टेस्टोस्टेरोन बढ्न सक्छ र शुक्रकीटको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ। यद्यपि, हस्तमैथुन नगर्नेसँग सम्बन्धित अन्य दावीहरूलाई समर्थन गर्न कुनै अनुसन्धान छैन। अधिकांश विज्ञहरू हस्तमैथुन सामान्य यौन विकासको एक स्वस्थ र अभिन्न अंग हो भनी सहमत छन्।
धेरै उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तर भएका पुरुषहरूले अनुभव गर्न सक्छन्: मुँहासे। आक्रामक वा जोखिम लिने व्यवहार। शरीरको अत्यधिक कपाल। टाउको दुखाइ। हृदय वा कलेजो समस्या। उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) उच्च सेक्स ड्राइभ (लिबिडो) भोक बढ्छ।
बुधवार, अक्टोबर 26, 2016 (हेल्थडे समाचार) - पूरक टेस्टोस्टेरोन र सम्बन्धित एनाबोलिक-एन्ड्रोजेनिक स्टेरोइड्स (AAS) ले हृदयघात, व्यक्तित्व परिवर्तन र बांझपन निम्त्याउन सक्छ, र सजिलै दुरुपयोग गर्न सकिन्छ, अमेरिकी खाद्य र औषधि प्रशासनले चेतावनी दिन्छ।
उनी भन्छन् कि तुलनात्मक रूपमा उच्च स्तरको टेस्टोस्टेरोन अधिक दीर्घायुसँग सम्बन्धित छ र लामो समयसम्म बाँच्ने मानिसहरूमा हार्मोनको स्तर राम्रो हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन मांसपेशी मास वृद्धि को लागी जिम्मेवार छ। पातलो बडी मासले तौल नियन्त्रण गर्न र ऊर्जा बढाउन मद्दत गर्छ। कम टेस्टोस्टेरोन भएका पुरुषहरूको लागि, अध्ययनहरूले देखाउँछ कि उपचारले बोसोको मात्रा घटाउन सक्छ र मांसपेशीको आकार र बल बढाउन सक्छ।
सामान्यतया, टेस्टोस्टेरोन थेरापी एक चलिरहेको उपचार हो जुन लामो समयसम्म जारी रहन्छ, यदि अनिश्चित कालको लागि होइन। धेरै पुरानो अवस्थाहरूसँग जस्तै, थेरापी रोक्नाले तपाइँका लक्षणहरू टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू एक पटक फेरि स्वस्थ स्तरभन्दा तल झरेको देख्न सक्छ।
1 मिली प्रति हप्ता टेस्टोस्टेरोन प्रति हप्ता 200 मिलीग्राम हो। यो एक प्रतिस्थापन खुराक हो जुन छोटो अवधिमा दुबला मास उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न देखाइएको छैन। यद्यपि, उच्च खुराकहरू प्रयोग गर्दा रातो रक्त कोशिकाको उत्पादन र रगतको चिपचिपाहट पनि बढ्न सक्छ, त्यसैले तपाईंको डाक्टरले तपाईंको हेमाटोक्रिट रक्त स्तरहरू निगरानी गर्न आवश्यक छ।
कम टेस्टोस्टेरोनको उपचारले कहिले काम गर्न थाल्छ? पुरुषहरूलाई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी दिइन्छ, यसले काम गर्न सामान्यतया तीन देखि छ महिना लाग्छ, फारुक भन्छन्। "केही पुरुषहरूले चाँडै सुधार देख्न सक्छन्, तर धेरै पुरुषहरूको लागि यो क्रमिक प्रक्रिया हो," फारुक भन्छन्।
यदि तपाईंले आफ्नो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शनको लागि अपोइन्टमेन्ट छुटाउनुभयो भने निर्देशनहरूको लागि आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्। यो औषधि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरले मेडिकल सेटिङमा दिएको हुनाले, ओभरडोज हुने सम्भावना छैन।
टेस्टोजेन वास्तवमा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो, र यसले शक्तिशाली सामग्रीहरूको स्ट्याक समावेश गर्दछ, यसलाई स्टेरोइडहरूको लागि उत्तम, प्राकृतिक, र सुरक्षित विकल्प बनाउँछ। वास्तविक एनाबोलिक स्टेरोइडहरू सामान्यतया टेस्टोस्टेरोनको विभिन्न रूपहरू हुन्, त्यसैले यसले यो अर्थ दिन्छ कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टरले तपाईंलाई मांसपेशी निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ एनाबोलिक स्टेरोइडहरूको 100 भन्दा बढी भिन्नताहरू छन्। सबैभन्दा शक्तिशाली एन्ड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हो (उच्चारण: tess-TOSS-tuh-rone)। यद्यपि टेस्टोस्टेरोन मुख्यतया परिपक्व पुरुष हार्मोन हो, केटीहरूको शरीरले सानो मात्रामा उत्पादन गर्दछ।
Trenbolone र Dianabol; Dianabol छोटो समयमा गम्भीर मांसपेशी मास निर्माण गर्न खोजिरहेका व्यक्तिहरूको लागि छनौटको स्टेरोइड हो। यो स्टेरोइड यसको क्षमताको लागि प्रख्यात छ, र टेस्टोस्टेरोनको साथ तपाईंको स्ट्याकमा थप्दा तपाईंको बल्किङ चक्रलाई शक्ति दिन्छ।
उपयुक्त आधार कम्पाउन्डको साथ क्रीम फारममा निर्धारित गर्दा, ट्रान्सडर्मल टेस्टोस्टेरोन अण्डकोशमा लागू गर्न सकिन्छ। स्क्रोटल छाला पातलो छ र उच्च स्टेरोइड पारगम्यता छ। अल्कोहलको साथमा क्रिम वा जेल प्रयोग नगर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनकि अल्कोहल स्क्रोटल छालाको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ।
के टेस्टोस्टेरोन पूरकहरू सुरक्षित छन्? केहि OTC टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरू मध्यस्थतामा प्रयोग गर्दा सुरक्षित हुन सक्छ, तर तिनीहरू स्थायी रूपमा तपाईंको टेस्टोस्टेरोन स्तर बढाउन वा कायम राख्न सक्दैनन्। OTC टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरूको सबै रूपहरूले आफ्नै अनौठो स्वास्थ्य जोखिमहरू प्रदान गर्दछ।
प्रश्न: कति लामो टेस्टोस्टेरोन चक्र
टेस्टोस्टेरोन कसरी साइकल गर्ने
प्रश्न: के कम टेस्टोस्टेरोन
के टेस्टोस्टेरोन घटाउँछ
मई जून बीटल जीवन चक्र
प्रश्न: टेस्टोस्टेरोन बूस्टरहरू कसरी साइकल गर्ने
द्रुत उत्तर: के तपाइँ टेस्टोस्टेरोनलाई साइकल गर्न सक्नुहुन्छ
प्रश्न: तपाइँ टेस्टोस्टेरोन कसरी साइकल गर्नुहुन्छ?
द्रुत उत्तर: मे बाइक
प्रश्न: कुन खानाले टेस्टोस्टेरोन कम गर्छ
द्रुत उत्तर: के खानाले टेस्टोस्टेरोन कम गर्छ
अघिल्लो पोस्ट: प्रश्न: किन रक साइकललाई साइकल भनिन्छ?
अर्को पोस्ट: प्रश्न: योजना B ले तपाइँको साइकल गडबड गर्नेछ